Stakeholder Questionnaire (ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူများအတွက်မေးခွန်းလွှာ)
Please complete as much of the questionnaire as you can, but note that you do not have to reply toaquestion if you think that it is not relevant or not applicable to your situation.
When possible, we would appreciate receiving responses that describe specific cases and
circumstances, substantiated if possible by indicators and/or data. If you would like to provide any supporting documentation, please forward it to us at comments@eu-myanmarsia.com.
မေးခွန်းလွှာများကို မိမိဖြေနိုင်သလောက် အကုန်ဖြေဆိုပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိအခြေ အနေနှင့် မပတ်သက်သော သို့မဟုတ် မသက်ဆိုင်သော မေးခွန်းကိုမူ ဖြေဆိုပေးရန် မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက ပြဿနာများ၏ အသေးစိတ် နှင့် အကျိုးအကြောင်း အခြေအနေများ၊ သက်သေသာဓက အညွှန်းများနှင့် /သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ အားဖြင့် ဖော်ပြပေးမည်ဆိုပါက မိမိတို့အနေဖြင့် များစွာ ကျေးဇူးများစွာတင်ပါမည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အထောက်အကူပြု စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့လိုပါက comments@eu-myanmarsia.com သို့ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
E-mail (Email လိပ်စာ)*
Company/ Organisation name (ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းအမည)
Country where you or your organisation is based (သင့်ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာတိုင်းပြည်)
- Select -Government institution/authority(အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အာဏာပိုင်)Academia/Think Tank/Research institution( ပညာရှင်/ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ/ သုတေသနအဖွဲ့အစည်း)Trade association representing business(စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားပြုကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်း)Trade union(အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း)Other (please specify)(အခြား (ဖော်ပြပေးပါရန်) )International organisation(နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း)Non-governmental organisation(အစိုးရမပာုတ်သောအဖွဲ့အစည်း)Business(စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)Individual(တသီးပုဂ္ဂလ)
Stakeholder type Other...Please specify TRANSPARENCY AND CONFIDENTIALITY(သထင်သာမြင်သာရှိမှု နှင့် လျှိ့ဝှက်ထားမှု)
To ensure that our public consultation is open and transparent, the report of the consultation will be published on the Trade SIA and European Commission websites. This report will includealist of the names and organisations of parties that have contributed.
မိမိတို့၏ အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုသည် ပွင်းလင်းပြီးထင်သာမြင်သာမှု ရှိစေရန်အတွက် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းမှု အစီရင်ခံစာကို Trade SIA နှင့် European Commission websites များတွင် တင်ြပ ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးဖြေကြားပေးကြသူများ၏ အမည်များ နှင့် အဖွဲ့ အစည်း များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြ မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးသူအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းကိုသဘောတူညီပါက အောက်ပါအချက် များကို ဖြေကြားပေးပါရန်
Please indicate if you agree to be named asacontributor to this consultation process. *
Yes, my name and organisation(ကျွန်ုပ်အမည်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအမည်ကို ဖော်ပြရန်)
Yes, my name only ( ကျွန်ုပ်အမည်ကိုသာဖော်ပြရန် )
Yes, my organisation only( အဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုသာဖော်ပြရန)
Neither (၂မျိုးလုံးအား ဖော်ပြခြင်းမပြုရန)
If you do not agree to publication of your name/organisation, then this information will remain strictly confidential. However, other answers will be published online.
သင့်အမည်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအမည်အား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖော်ပြလိုခြင်းမရှိပါက သတင်း အချက်အလက်များအား လျှိ့ဝှက်စွာထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခြားဖြေကြားချက်များအား Online တွင် ထုတ်ပြန်မှုပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ Section A: Questions for all stakeholders
Q1: Please describe your activity in/with Myanmar၁။ မြန်မာပြည်တွင်/မြန်မာပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်၏ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖော်ပြပေးပါရန
Q2: Do you think investment by investors from the European Union can benefit Myanmar? Please explain why and how.၂။ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အဘယ်ကြောင့် နှင့် မည်သို့ ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်း ဖော်ပြ ပေးပါရန်။ Q3: What is your understanding of the Investment Protection Agreement currently being negotiated by the European Union and Myanmar?၃။ ယခု ဥရောပသမဂ္ဂက ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို သင်မည်သို့ နားလည်ပါသနည်း?
Q4: Do you think that the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar is going to have an impact on your activity? Why?၄။ အီးယူ-မြန်မာ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်/စာချုပ် သည် မိမိ၏လုပ်ငန်း အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား? အဘယ်ကြောင့်နည်း။
Q5: If you representacompany, does your company meet the standards below to be defined asaSME*?၅။ သင်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါက ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စား ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် စံနှုန်းများအောက်တွင် ရှိပါသလား?
1) It employs less than 250 persons (including managers, etc.) AND
၂၀၀၃ ခုမေလ(၆) ရက် ကော်မရှင်၏ ထောက်ခံချက်တွင် ဖော်ပြထားသည် အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (OJL 124, 20.5.2003, p.36) အရ ကုမ္ပဏီတခုသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အကျုံးဝင်ရန် - ၁။ ၀န်ထားအရေအတွက် ၂၅၀အောက် (မန်နေ၈ျာများအပါအ၀င်)
နှင့် ၂။ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေ ယူရို ငွေ သန်း ၅၀ထက်မပို သို့မပာုတ် နှစ်စဉ် လက်ကျန်ငွေရှင်းတမ်း ယူရိုငွေ ၄၃ သန်းထက်မပိုသောလုပ်ငန်း Please note that the previously mentioned figures (employees, turnover and balance sheet) refer to the consolidated data of the company in question and its partners and/or linked companies proportionally aggregated to the percentage interest in the capital or voting rights. For further explanations please consult the official EU definition.
ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့် ကိန်းဂဏန်းများ (အလုပ်သမားများ၊ ၀င်ငွေ နှင့် အ၀င်အထွက်ဇယား) သည် မေးခွန်း မေးမြန်းသည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် ယင်း၏ မိတ်ဘက်များ နှင့် /သို့မဟုတ် ငွေအရင်းအနှီးအတိုးရာခိုင်နှုန်း တွင် အချိုးကျ ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသည့် သို့မဟုတ် မဲပေးပိုင်ခွင့်များ ရှိသည့် ချိပ်ဆက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများ စာရင်းပေါင်း ချုပ် ပြုလုပ်သည့် ရက်စွဲကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
Q6: In which sector(s) does your company operate? (If more than one, please specify)သင့်ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေပါသနည်း (တခုထက်ပိုပါကဖော်ပြပေးပါရန်) Q7: Does your company have investments or operations in Myanmar? If so, for how many years, with how many employees and for how much in terms of invested amounts? If not, what are the reasons?၇။ သင့်ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (သို့) လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းရှိပါသလား? ရှိပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့်နှစ်သက်တမ်း၊ ၀န်ထမ်းအရေအတွက်၊ ရင်းနှီးငွေကိုများကိုဖော်ပြပေးပါရန်။ မရှိပါက အကြောင်းပြချက်များကို ဖော်ပြပေးပါရန် Q8: How important is Myanmar for your company's business?
(Very important - important - rather important - not important)
၈။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအတွက်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း?
(အလွန်အရေးကြီး - အရေးကြီး - အတော်အသင့်အရေးကြီး - အရေးမကြီး)
Q9: How important do you anticipate Myanmar will be for your company's business in the future?
သင့်အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ကြိုတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အနာဂတ်သင့်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေး အတွက် မည်မျှအရေးပါသနည်း?
Q10: What would the significance of an Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar be on your company's decision to invest or to expand in Myanmar:
a) Essential b) Important c) Not important
၁၀။ သင့်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွင် အီးယူ-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်/စာချုပ်၏အရေးပါမှုမှာ
Q11: In which way do you think the following areas are going to be impacted by the
Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar?အီးယူ-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်/စာချုပ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ နယ်ပယ်များကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ပာု သင်ထင်ပါသနည်း?
အကျိုး သက် ရောက်မှု
သော အကျိုးသက် ရောက်မှု
Q12: According to you, what are likely to be the main economic (positive or negative) impacts of the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? Please specify why and give concrete examples. Indicators can include but are not limited to:၁၂။ သင့်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်၏ စီးပွားရေး အပေါ် အဓိကသက်ရောက်မှုများ (အဆိုး သို့မဟုတ် အကောင်း) ဖြစ်လာနိုင်သည့် အရာများသည် မည်သည့်အရာများ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရ သည်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ခိုင်လုံသော ဥပမာများ ပေးပါရန်။ အချက်ပြအညွှန်းများတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့တွင်သာ ကန့်သတ်မထားရန် Economic growthစီးပွားရေးတိုးတက်မှုReal income	- Employment (overall and sector-based job creation/loss; indirect effects)အမှန်ဝင်ငွေ(အလုပ်အကိုင်(လုပ်ငန်းအားလုံး ကဏ္ဍဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်တိုးတက်/ဆုတ်ယုတ် သွယ်ဝိုက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု))Skills development
- Technology transferကျွမ်းကျင်မှု
Local competition	- Costs for domestic governmentပြည်တွင်း ယှဉ်ပြိုင်မှု
Economic transferRight to privacy and protection of dataRight to assemblyRights of indigenous peoples
Q13: According to you, what are likely to be the main social (positive or negative) impacts of the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? Please specify why and give concrete examples. Indicators can include but are not limited to:၁၃။ သင့်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်၏ လူမှုရေး အပေါ် အဓိကသက်ရောက်မှုများ (အဆိုး သို့မဟုတ် အကောင်း) ဖြစ်လာနိုင်သည့် အရာများသည် မည်သည့်အရာ များဖြစ်နိုင်မည်နည်း? အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရ သည်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ခိုင်လုံသော ဥပမာများ ပေးပါရန်။ အချက်ပြအညွှန်းများတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့တွင်သာ ကန့်သတ်မထားရန် - Employmentအလုပ်အကိုင်Working conditionsလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေIncome distribution and social inclusion၀င်ငွေခွဲဝေပျံနှံ့မှုနှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုIncome distribution and inequalities၀င်ငွေခွဲဝေပျံနှံ့မှုနှင့်
Poverty rateဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းAvailability of basic goods and servicesအခြေခံကုန်စည်နှင့်
Social protection and access to healthလူမှုရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမားရေး ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းရရန်
Access to educationပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းရရန်
Q14: According to you, what are likely to be the main environmental (positive or negative) impacts of the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? Please specify why and give concrete examples. Indicators can include but are not limited to:၁၄။ သင့်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အဓိကသက်ရောက်မှုများ (အဆိုး သို့မဟုတ် အကောင်း) ဖြစ်လာနိုင်သည့် အရာများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်နိုင်မည်နည်း? အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရ သည်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ခိုင်လုံသော ဥပမာများ ပေးပါရန်။ အချက်ပြအညွှန်းများတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့တွင်သာ ကန့်သတ်မထားရန် -
Land (agriculture, forest, desertification, urbanization)မြေ (စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ သစ်တော ပြုန်းတီးမှု၊ မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု)
Water (seas and coasts, fresh water, fisheries)ရေ (ပင်လယ်များ၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းများ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်
သောရေ၊ အင်း) Biodiversity (ecosystem, protected areas' species)ဇီဝမျိုးစိတ်ကွဲပြားခြင်း (ဂေပာစနစ်၊ အကာ အကွယ်ပေးထားသော ဒေသများရှိမျိုးစိတ်များ)Modes of production and consumption (energy resources, waste, transport)ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုံးစွဲမှုများ (စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် ၊ ပြုန်းတီးမှု၊ ပို့ဆောင်ရေး)
Pollution (air, soil, water)ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု (လေ၊ မြေ၊ရေ) Q15: According to you, what are likely to be the main human rights (positive or negative) impacts of the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? Please specify why and give concrete examples. Indicators include but are not limited to:၁၅။ သင်၏အမြင်သဘောထားအရ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး အပေါ် အဓိကသက်ရောက်မှုများ (အဆိုး သို့မဟုတ် အကောင်း) ဖြစ်လာနိုင်သည့် အရာများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်မည်နည်း? အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရ သည်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ခိုင်လုံသောဥပမာများ ပေးပါရန်။ အချက်ပြအညွှန်းများတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့တွင်သာ ကန့်သတ်မထားရန် -
Right to due processမိမိနစ်နာမှု/ရပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍အရေး ဆိုပိုင်ခွင့် Rights to adequate standard of livingပြည့်စုံလုံလောက်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းရရှိရန်အခွင့်အရေးFreedom of expressionလွတ်လပ်စွာဆန္ဒ
ဖော်ဆောင်မှု Right of people with disabilitiesမသန်မစွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး
Right to propertyပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးRight to privacy and protection of dataကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အရေးRight to assemblyလူစုလူဝေးပြုလုပ်ရန်
Rights of indigenous peoplesလူမျိုးနွယ်စုများ၏ အခွင့်အရေး
Q16: In your opinion, could there be an impact on consumers from an Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? Please specify why and give concrete examples. Indicators can include but are not limited to: consumer prices, quality, availability, choice and safety of goods and services, consumer information, knowledge or trust.၁၆။ သင်၏အမြင်တွင် အီးယူ-မြန်မာ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်/စာချုပ် တစ်ခုမှ စားသုံးသူများအပေါ် သက်ရောက်မှုတစ်ရပ် ရှိလာနိုင်မည်လား။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရသည်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ခိုင်လုံသော ဥပမာများ ပေးပါရန်။ အချက်ပြ အညွှန်းများတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင်သာ ကန့်သတ်မထားရန် ဖြစ်ပါသည်----စားသုံးသူဈေးနှုန်းများ၊ အရည် အသွေး၊ ရရှိနိုင်မှု ၊ ကုန်စည်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များအပေါ် ရွေးချယ်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းမှု၊ စားသုံးသူဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ၊ အသိပညာ သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှု Q17: In which way do you think the following sectors are going to be impacted in terms of their respective economic, social, environmental and human rights situations by the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? (positively, neutrally and/or negatively)
Please choose the3most important sectors.
၁၇။ အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများတွင် အီးယူ-မြန်မာ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီ ချက်ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများတွင် မည်သည့် နည်းလမ်းအားဖြင့် သက်ရောက်မှုဖြစ်စေလိမ့်မည် ဟု သင်ထင်ပါသနည်း? (အကောင်းဘက်၊ ကြားနေ နှင့် အဆိုးဘက်မှ) ကျေးဇူးပြု၍ အရေးအကြီးဆုံး ကဏ္ဍသုံးခုကို ရွေးချယ် ဖော်ပြပေးပါရန်
Agriculture and fisheryစိုက်ပျိူးရေးနှင့်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
Please also explain why.အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကိုရှင်းပြပေးပါရန်။ Q18: Can you think of any measures to maximise potential positive impacts of the
Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? If so, please explain.အီးယူ-မြန်မာ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၏ အပြုသဘော ဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အများဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို သင်စဉ်းစားနိုင်ပါလား? အကယ်၍ စဉ်းစားနိုင်မည်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးပါရန်။
Q19: Can you think of any measures to prevent or mitigate potential negative impacts of the Investment Protection Agreement between the European Union and Myanmar? If so, please explain.၁၉။ အီးယူ-မြန်မာ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၏ အပြု သဘောမဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျော့ပါးစေရန် လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို သင်စဉ်းစားနိုင်ပါလား? အကယ်၍ စဉ်းစားနိုင်မည် ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးပါရန်။
Q20: We thank you for your time and participation. Your input is much appreciated. If there are other issues related to that are not mentioned on which you would like to provide your views, please do so below or email them to us at comments@eu-myanmarsia.com.မေးခွန်းလွှာအတွက်လူကြီးမင်း၏အချိန်နှင့်ပူပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အကြံပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိ် ပါသည်။ ယခုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းလွှာတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော အချက်အလက်များအား အကြံပေး တင်ပြလိုပါက comments@eu-myanmarsia.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။